Technology Archives - Lifestyle Myanmar
Home Category Lifestyle Technology
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော နေ့စဉ်အမူအကျင့်များ
စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သော အမူအကျင့် (၆) ချက်
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်မူတည်ပြီး ၂ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အကြား သက်တမ်းကြာနိုင်ပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဘက်ထရီကို ပညာရှိရှိအသုံးပြုပေးပြီး သင့်အက်ပ်တွေကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် သင်မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်း သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ အားသွင်းပေါက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ သတ္တုချောင်းတွေ မသုံးပါနဲ့ သံချောင်း၊...
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ မလုပ်သင့်သော အချက် (၉)ချက်
စမတ်ဖုန်းတွေက သူ့ brand ပေါ်မူတည်ပြီး ၂နှစ်မှ ၁၀နှစ်အကြား သက်တမ်းရှိနိုင်ပေမယ့် ကြာရှည်အသုံးခံခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဖုန်းတစ်လုံးကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်မယ်၊ ဘက်ထရီကို ပညာရှိရှိသုံးမယ်၊ အက်ပ်တွေကို အပ်ဒိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြာရှည်အသုံးခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ သိရုံနဲ့တင်မပြီးဘဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ၁။ အားသွင်းပေါက်ကို သတ္တုပင်ချောင်းတွေသုံးပြီး...
လူကြီးတွေနဲ့ ကလေးတွေမှာ Screen Time ဘယ်လောက်ဆို အဆင်ပြေလဲ?
အီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းတွေက ဒီနေရာမှာ တည်ရှိနေမှာ သေချာပြီး လူအများစုက ဆိုရှယ်မီဒီယာက တဆင့် (သို့) အကြောင်းအရာတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့ခြင်းမှတဆင့် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာအောင် သုံးစွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် Screen ကိုအကြာကြီးကြည့်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ဒီအချိန်ကို ကန့်သတ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ လူကြီးတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် အကြံပြုထားတဲ့ Screen Time...
နိုင်ဂျီးရီးယားဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ အင်စတာဂရမ်ပေါ်က အဖိုးတန်ဓါတ်ပုံများ
ဓါတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့ ဘာလိုအပ်သလဲ? အဲ့ဒါက လူတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မှာ လုံးလုံးမူတည်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ကင်မရာကောင်းကောင်းလိုတယ်၊ တစ်ချို့က ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာ လိုချင်တယ်၊ တစ်ချို့က ဓါတ်ပုံရဲ့ angle (ဒါမှမဟုတ်) အလင်းအမှောင်ကို ပိုစိတ်ပူကြပါတယ်။ Follower 189K ကျော်ရှိတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားဓါတ်ပုံဆရာ lbor Edosa Victor ကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ setting တွေမလိုအပ်ကြောင်း သူ့ပရိသတ်တွေကို...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်လို ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း
အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကင်မရာ၊ fancy lenses တွေနဲ့ editing software တွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်စမတ်ဖုန်းဓါတ်ပုံကစားနည်းကို အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပရိုတစ်ယောက်လို စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံအလန်းစားတွေ ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဓါတ်ပုံရိုက်နေစဉ် patterns တွေရှာပါ Patterns ရှာဖွေခြင်းက တောက်ပတဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုတွေ ဖန်တီးဖို့ နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pattern...
ကိုယ်နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို တခြားသူမသိအောင် ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ဆီကနေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ၊ ငွေကြေးတွေ ခိုးယူခြင်းမှ တားဆီးလိမ့်မယ့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၆)ချက်ကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။ ၁။ public charging stations တွေမှာ ဖုန်းအားမသွင်းပါနဲ့ ခရီးသွားနေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ လေဆိပ်မှာပဲဖြစ်စေ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ...
အွန်လိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းလေးတွေ စတင်မယ့်လူတွေအတွက် လုပ်ငန်းအသေးစားလေးများ (၆) ခု
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူတစ်ဦးချင်းစီဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ တစ်ချို့က အောင်မြင်ကပေမယ့် တစ်ချို့မှာတော့ အောင်မြင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ စီးပွားရေးစလုပ်မယ်ဆိုရင် အခြေခံကောင်းကောင်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းက အကြံဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းက အခြေခံကောင်းအဖြစ် သင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံးစိတ်ကူးဟာ ခိုင်မာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သင့်စီးပွားရေးက ရလဒ်ကောင်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစလုပ်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအသေးစားလေးတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ Online Assistant...
Rakuten Viber မှ ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် အသုံးပြုသူများပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် နည်းလမ်းများကို ယူဆောင်လာ
အခမဲ့နှင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Rakuten Viber သည် အသုံးပြုသူများ၏ လုံခြုံမှုနှင့်အတူ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများကို အလေးထားသည့်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူများအတွက် messaging ပလက်ဖောင်းပုံစံအသစ်တစ်မျိုးကို ယူ‌ဆောင်လာမည်ဟု ၄င်း၏ ဆယ်နှစ်ပြည့်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း Viber သည် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မည်သူနှင့်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာမှဖြစ်စေ အခမဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်...
စွန့်ပစ်အစားအစာမှတဆင့် တိမ်ထူတဲ့နေ့မှာတောင် စွမ်းအင်ထုတ်နိုင်သော “Solar Panels “တွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ၂၇နှစ်အရွယ် ကျောင်းသား
James Dyson Award ဆိုတာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲက မျိုးဆက်သစ် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့၊ အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယှဉ်ပြိုင်မှုက အင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းတွေ နယ်ပယ်မှ တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းသားတွေအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ဂျိမ်းစ်ဒိုင်ဆန်ရဲ့ အကျိုးပြုဆုဟာ စွန့်ပစ်အစားအစာကို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ နည်းလမ်းကို...
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာ (၇) မျိုး
သင်ကိုင်တဲ့ဖုန်းက Android မို့လို့၊ iPhone မို့လို့ဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုဖုန်းအမျိုးအစားကိုပဲသုံးသုံး၊ သင့်အတွက် အသုံးဝင်ဖို့ကပဲ အရေးကြီးပါတယ် ဖုန်းလောကမှာ Android နဲ့ iOS ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်ရှိနေပြီး Apple ရဲ့ စျေးနှုန်းကြောင့် လူတန်းစားတစ်ရပ်ကပဲ Apple ဖုန်းတွေကို ကိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ Android က ပိုကောင်းတယ်၊ iOS က...